फ्यान भन्दा सस्तो ‘पोर्टेबल एयर कन्डिसन’ :: NepalPlus
फ्यान भन्दा सस्तो ‘पोर्टेबल एयर कन्डिसन’
नेपाल प्लस२०७७ साउन १७ गते १५:३३
राष्ट्रिय मौसम विभागहरूले रिपोर्ट गरिरहेका छन कि यो वर्ष अत्यधिक गर्मी बढ्दै छ । अब तापक्रम दशकौंसम्म तातो हुन सक्छ । यसबाट बच्न तपाई तयार हुनुहुन्छ ? परम्परागत वातानुकूलित तरिका पुरानो हो । तिनीहरू महँगो पर्छन् । अत्यधिक आवाज आउँछ । सफा गर्न गाह्रो छ । बिजुलीमा भर पर्नाले गाह्रो र महँगो पर्छ । अझ तिनलाई वरिपरि वा घर बाहिर सार्ने त कल्पनापनि गर्न सकिन्न ।
फ्यानहरूको काम के हो ? तिनीहरू सस्ता छन् । निस्चित ठाउँमा जडित छन् । तिनीहरूले केवल हावा चारैतिर उडाउँछन् । चारतिरको हावा जम्मा पारेर तपाईले जता फ्यान सोझ्याउनुहुन्छ त्यतै फाल्छन् । तर चिसो हावा भए न त्यस्तो फ्यानले काम गर्छ । तर वरिपरिबाट त्यसले बटुल्ने हावानै तातो छ भने के गर्ने ? यसले तपाईलाई सितलता दिन त सक्दैन ।
पछिलो चरणमा त्यसको बिकल्प निकालिएको छ । ब्लोक्स द्वारा धेरै सस्तो परम्परागत एयर कन्डिशनर र अन्य ठूला ब्रान्डका फ्यान बिकल्पका रुपमा निकालेको छ । बढ्दो गर्मीसँगै सन् २०२० कोलागि यो सबैभन्दा सफल उपकरणका रुपमा मानिएको छ ।
ब्लोक्स पोर्टेबल एसी ब्ल्याक्स कम्पनीले सन् २०१९ मा अनुभवी एयर कूलर ईन्जिनियरहरूको समूहले गठन गरेको हो । तिनीहरूको लक्ष्य भनेको कम खर्च र कम मर्मत सम्भार एसी इकाई बनाउनु थियो जुन कुनै घर, कार्यालय वा कारको लागि उपयुक्त होस् । यहि सिद्दान्तमा आधारित रहेर तिनले ब्लोक्स पोर्टेबल एसी बनाए । त्यसलाई हाल एक ईन्जिनियरिंग मास्टरपीस मानिन्छ । परम्परागत एसीको तुलनामा यो ३०० प्रतिशत बढि कुशल, सानो, यताउति बोकेर हिँड्न सकिने र यसले हवालाई धेरै छिटो चिसो बनाउनपनि सक्ने प्रमाणित भएको छ ।
यो सेट अप गर्न सजिलो छ । ट्याप पानीले ३०० मिलि ट्यांक भरेरर स्टार्ट बटन थिचेपछि एसि अन हुन्छ । यसको आकार परम्परागत एसीको तुलनामा सानो छ । तर यसको क्षमताको कारण एक पूर्ण रिभ्वाइसले गर्दा पुरै दिन चिसो दिन सक्छ ।
शक्तिशाली रिचार्जेबल २०० एमएएच ब्याट्री हुन्छ यसमा । ब्लोक्स पोर्टेबल एसी १०० ताररहित हो । तपाईं यसलाई आफूले चाहेको कुनै पनि कोठामा, अफिस, बेडरूम, ग्यारेज, भान्छामा लैजान सक्नुहुन्छ । तपाईं जहाँ जानुहुन्छ तातोबाट तत्काल राहत पाउन सकिन्छ ।
तपाईं कुनै पनि युएसबि केबलबाट ब्याट्री चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको ल्यापटपले यसलाई उर्जा दिनपनि सक्छ । अर्थात् ल्यापटपबाटैपनि चार्ज गर्न सकिन्छ । यसरि चार्ज गरेर लगाएको यो एसीले कुनैपनि कोठाको तापक्रम १० डिग्रीसम्म बनाउन सक्छ ।
यसले कोठालाई शान्त पार्ने काम गर्छ । अर्थात् अरु एसी जस्तो आवाज आउन्न । ब्लेक्स पोर्टेबल एसीले तपाईंको वरपरको हावा पनि फिल्टर गर्दछ । यसलाई स्वास्थ्यकर र सास फेर्न सजिलो बनाउँदछ । खास गरी मौसमी एलर्जी छ भने झनै स्वास्थ्यकर मानिन्छ ।
यसलाई मोड सेट गर्न सकिन्छ । नियमित फ्यान जसरिपनि स्विच गर्न सकिन्छ । यसले वायु गुण नियन्त्रण गर्छ । ह्युमिडिफायरको रूपमा काम गर्न सक्छ । यदि तपाईं सुख्खा हावा वा भरिएका साइनसबाट पीडित हुनुहुन्छ भने ब्लेक्स पोर्टेबल एसीले तपाईंलाई राम्रो महसुस गराउन सक्छ । ब्लेक्सले वास्तवमै चिसो हावा बनाउँछ एकदमै द्रुत गतिमा । यसले स्फूर्तिदायी हावा बाहिर पम्प गर्दछ । यसका अति उच्च, मध्यम र ढिलो गरेर तिन गति हुन्छन् जुनमा मन पर्‍यो त्यहि गतिमा सेट गर्न सकिन्छ ।
पानी एकदमै कम भरेर सेट गर्न सकिन्छ । ठूलो क्षमताको ३०० मिलि ट्यांकसम्मपनि भर्न सकिन्छ । यो हलुको भएकोले बोक्न सजिलोपनि छ । यसले आवाज निकाल्दैन । त्यसैले तपाईको एकाग्रता वा निद्रामा बाधा पुर्‍याउँदैन ।
परागकण, धूलो र सबै इनडोर हावामा वरिपरि तैरिरहेका मसिना फोहोरहरुलाई यसले फिल्टर गरिदिन्छ । इनडोर प्रदूषण खराब हुन्छ जब तपाईं हर समय भित्र हुनुहुन्छ । तपाईको लुगा र कपालको कणहरू पनि हावामा तरिएका हुन्छन् । तिनलाईपनि यसले तानेर फिल्टर गरिदिन्छ । किनकि जालमा यि सबै कणहरु फ्याँक्नु अघि यसको पानीको पर्दा भएकाले त्यसैमा टाँस्सिन्छन् ।
परम्परागत एसीहरु तिन सय डलर देखि आठ सय डलर पर्छन् । तर यो एसी जम्मा १७८ देखि १८० डलरसम्ममै पाइन्छ ।